हलिडे मार्केटि toका लागि प्रालिंगेटर गाइड Martech Zone
छुट्टीको मौसम आधिकारिक रूपमा यहाँ छ, र यो रेकर्डमा सबैभन्दा ठूलो हुनको लागि आकार दिन्छ। EMarketer को साथ खुद्रा इ-कमर्स खर्चको भविष्यवाणी यस मौसममा १142२ अरब डलर पार गर्नुहोस्, त्यहाँ वरिपरि जानको लागि धेरै राम्रो छ, साना किराना विक्रेताको लागि पनि। प्रतिस्पर्धी रहन को लागी तयारी को बारे मा स्मार्ट प्राप्त गर्नु हो।
आदर्श रूपमा तपाईंले पहिले नै यो प्रक्रिया सुरू गर्नुहुनेछ, तपाईंको अभियानको योजना बनाउन र ब्रान्डि and र दर्शकहरूको सूचि निर्माण गर्न विगतका केही महिनाहरू प्रयोग गर्दै। तर ती जो अझै अझै आफ्नो ईन्जिन अप गरिरहेछन्, ध्यान दिनुहोस्: प्रभाव पार्न ढिलो भएन। यहाँ चार ठोस चरणहरू छन् जुन तपाईंलाई सफल छुट्टी रणनीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्दछ।
चरण १: तपाईंको टाइमलाइन अनुकूलन गर्नुहोस्
जे होस् 'छुट्टिहरू' क्रिसमसको लागि प्राविधिक रूपमा थैंक्सगिभिंग फ्याँकन्छ, छुट्टी किनमेल मौसम यति परिभाषित छैन। २०१ shopping किनमेल व्यवहारमा आधारित, Google ले त्यो देखाउँदछ November 45% उपभोक्ताहरूले नोभेम्बर १th सम्म छुट्टी उपहार खरीद गरेको रिपोर्ट गरे, र धेरै नोभेम्बरको अन्तमा उनीहरूको छुट्टी किनमेल सकिसकेका छन्।
स्मार्ट टाइमलाइनको साथ, भोलि पार्टीमा पुग्नु भनेको मुख्य पाठ्यक्रममा हराइरहेको हुनु हुँदैन। नोभेम्बर मध्य ब्रान्डि and र भविष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रयोग गर्नुहोस् - यसले तपाईंलाई उपभोक्ताहरू उनीहरूको विचार र खरीद चरणमा पुग्न मद्दत गर्दछ।
धन्यबाद र साइबर सप्ताह को रूप मा, सम्झौता को रोल आउट र च्यानलहरु मा विज्ञापन विस्तार, उपभोक्ताहरु बीच उत्साह पैदा। त्यसो भए, साइबर सोमबार भन्दा ठीक अघि तपाइँको खोजी र पुन: बजार बजेट बढाउनुहोस्। समग्रमा, छुट्टीको मौसममा तीन देखि पाँच गुणा बजेट बढाउँदा प्रतिस्पर्धी बजारमा ती अतिरिक्त रूपान्तरणहरू क्याप्चर गर्ने उत्तम मौका दिन्छ।
अन्तमा, Q1 ई-वाणिज्यको लागि सब भन्दा बलियो महिना मध्ये एक साबित भएको छ, नयाँ वर्षमा छुट्टीको गतिलाई राम्रोसँग लैजान्छ। कम्तिमा जनवरी १ 15 मा तपाईंको बजेट बलियो राख्नुहोस् पट्टी छुट्टी किनमेलमा यो बढ्दो प्रवृत्तिको अधिकतम बनाउन।
चरण २: प्राथमिकता निजीकृत
प्रायः साना खुद्रा विक्रेताहरूले कहिले पनि अमेजन र वालमार्ट जस्ता राक्षसहरूको विज्ञापन बजेटसँग मेल खाने आशा गर्न सक्दैनन्। प्रतिस्पर्धी रहन, बजार चलाखी छ - कडा होईन - तपाईंको निजीकरण acing द्वारा।
जब तपाइँ तपाइँको अनुकूलन को लागी एक दृश्य को रूप मा दर्शकहरु लाई जम्मा गर्नुहुन्छ, जीवनभर मानमा फोकस गर्नुहोस्। कसले तपाईका सूचिको बीचमा धेरै पैसा खर्च गरेको छ र तपाईसँग धेरै जसो किनमेल गर्नुहुन्छ? तपाईंको भर्खरको किनमेल गर्नेहरू को थिए? यी अप्सलिंग र क्रस सेलिंगका लागि मुख्य लक्ष्यहरू हुन्, अतिरिक्त विज्ञापन खर्च मोड्दै, सम्बन्धित आइटमहरू सुझाव गर्ने, छुटमा बन्डलिंग प्रस्ताव गर्दै वा चेकआउटमा उपहार प्रदान गरेर।
जीवनभरका दुकानदारहरूको पालनपोषण गर्दा, नयाँ आगन्तुकहरूलाई ट्र्याक गर्न र लक्षित गर्न नभुल्नुहोस्। क्रोइटो रिपोर्ट गर्दछ कि वेबसाइट आगन्तुकहरु जो प्रदर्शन विज्ञापनको साथ retargeted छन् 70% अधिक सम्भव छ रूपान्तरण गर्न। यी आगन्तुकहरूको गतिविधि रेकर्डिording र छुट्टी मौसम भर Segmented सूचि निर्माण तिनीहरूलाई फिर्ता ल्याउन र रूपान्तरणहरू सुरक्षितको लागि महत्वपूर्ण हो।
चरण:: क्राफ्ट स्मार्ट प्रचार
पदोन्नति राम्रो काम गर्दछ यदि तिनीहरू तपाईंको विशेष श्रोताको आवश्यकता र प्राथमिकताहरू फिट छन्। तपाईंको विगतका छुट्टि प्रचलनहरू समीक्षा गर्नुहोस् र के काम गर्दछ अध्ययन गर्नुहोस्, त्यसपछि ती पदोन्नतीहरूमा लगानी गर्नुहोस्।
के राम्रो काम गर्ने बारे निश्चित हुनुहुन्न? eMarketer रिपोर्ट गर्दछ कि सब भन्दा अपिलिंग प्रोमोशनल प्रस्ताव छूट छ एक भारी 95% द्वारा। नि: शुल्क शिपिंग पनि आवश्यक छ जब आवश्यक छ, र नि: शुल्क उपहार र वफादारी पोइन्ट पनि उपभोक्ताहरूलाई अपील गर्दैछन्। तपाईंको उत्पादन र बजेटमा निर्भर गर्दै, तपाईं ग्यारेन्टी गरिएको डेलिभरी मितिहरू, कुपन कोडहरू, प्रि-लपेटिएका उपहार सेटहरू र अनुकूलन सन्देशहरू विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
चरण:: तपाइँको वेबसाइट ट्राफिक-तैयार गर्नुहोस्
के तपाइँको वेबसाइट वास्तव मा छुट्टी यातायात को लागी तयार छ? केहि सानो परिवर्तनले ठूलो भिन्नता बनाउन सक्दछ जब यो अन्तिम बिक्री गर्न आउँदछ।
यो सुनिश्चित गरेर सुरू गर्नुहोस् कि तपाइँको वेबसाइटले मुख्य प्रश्नहरू र श doubts्काउहरू जो शपिंग अनुभवको बखत देखा पर्दछ। प्रवेश गर्न बाधा कत्तिको उचाई छ? फिर्ती कत्तिको सजिलो छ? म कसरी उत्पादन प्रयोग गर्ने? साधारण चरणहरू जस्तै मूल्य अनुसार उत्पादनहरू विभाजन, ग्राहक समीक्षा विशेषता र फिर्ताको सहजताको रूपरेखाले ग्राहकहरूको साथ विश्वास निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
अर्को, तपाईंको वेबसाइटलाई मोबाइलमा नेभिगेट गर्न सजिलो बनाउनुहोस्। गुगल अनुसन्धानले यो देखाउँदछ % 73% उपभोक्ताहरू खराब डिजाइन गरिएको मोबाइल साइटबाट एक वैकल्पिक मोबाइल साइटमा स्विच हुनेछ यसले खरीद सजिलो बनाउँछ। तपाईंको मोबाइल उपस्थिति हेरेर यी रूपान्तरणहरू हराउने जोखिम नगर्नुहोस्।
अन्त्यमा, तपाईंको ई-कमर्स स्टोरको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण अंश अप्टिमाइज गर्नुहोस्: चेकआउट। किन खरीदारहरूले उनीहरूको कार्ट त्यागेर ती मुद्दाहरू सच्याउनको लागि बुझ्ने समय लिनुहोस्। के यो शिपिंग शुल्क वा अन्य अप्रत्याशित मूल्यहरू हो? के तपाईको चेकआउट जटिल छ र समय खपत भएको छ? के किनमेलकर्ताहरूले खाता खोल्नु पर्छ? आफैलाई बिक्री पूरा गर्ने उत्तम मौका दिन प्रक्रिया सकेसम्म सरल बनाउनुहोस्।
छुट्टीको मौसमको तयारी गर्दा यी लिने केहि मुख्य कदमहरू हुन् - तर तपाईले कति ढिलो सुरू गर्नुभयो, अनुकूलन र निजीकरणतर्फ प्रत्येक कदमले तपाइँको तल्लो रेखामा फरक पार्न मद्दत गर्दछ। अझ राम्रो, तपाईंले हालसालमा राख्नु भएको काम, साईट परिवर्तनबाट ब्रान्डको विकासको लागि, पहिले नै तपाईंलाई नयाँ बर्ष र यसभन्दा पछाडि प्रभावकारी मार्केटि forको लागि तयार गर्दैछ।
टैग: साइबर हप्ताइकमर्सछुट्टी किनमेलअनुकूलनwalmart
याएल ई-वाणिज्य को निर्देशक हो Adtaxi। उनीसँग सफल रूपान्तरण फनेल निर्माणमा वर्षौंसम्म सफल सफलता रहेको छ र कोचिंगको लागि प्रगतिशील सोच नेता र संरक्षक हो, अग्रणी र प्रेरणादायक आन्तरिक र भर्चुअल टीमहरू।